Madasha Akhriska Maskax Maal Ee Borama oo soo bandhigtay Buug la magac baxay Saydaratul Alxayaat +Sawiro « SAWNEWS NETWORK
« Doodii igu waynayd ee sanadkii 2009,Cristiano Rolando ma yahay laacib ka dhamaystiran ama ka wanaagsan Loiner Messi?
Guddoomiye-ku-xigeenka 1aad ee Baarlamaanka Kiiniya oo Deeq Waxbarasho u fidiyay Arday Reer Sool ah »
Madasha Akhriska Maskax Maal Ee Borama oo soo bandhigtay Buug la magac baxay Saydaratul Alxayaat +Sawiro
(Sawnews)Madasha Akhriska ee maskaxmaal ayaa caawa waxa ay soo bandhigtay Buug la magacbaxay saydaraatul alxayaat oo la micna ah sida nolosha loo maareeyo.
Madasahan ayaa caadi ahaan waxaa buugta la soo bandhigaa la akhrinayo Bilowga bilwalba jimcaha ugu horeeya.
Madashan ayaa waxaa caadi ahaan ka soo qayb gala dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha, Dugsiyada sare iyo kuwa dhexeba.
Dhalinyaradan ayaa waxa ay iskugu jiraan gabdho iyo wiilal, waxa ayna aad uxiiseeyaan sida wanaagsan ee loo maamulo maskaxmaal taas oo lagu soo bandhigo had iyo jeeraale Buug Da’yarta wax badan u faa’iidaynaysaa haday noqon lahayd aqoontooda iyo waaya aragtinimada u kordhaysa.
Buugan caawa la soo bandhigay ayaa waxaa soo jeedinaysay Gabadh Da’yar ah oo dhigata Dugsiga Sare ee Al-aqsa Fasalka afaraad ee dugsiga Sare. Oo magaceedu yahay Raxma Xasan Tubeec, waxaana la soo jeedinayay gabdhaha kala ah.
Sagal Cali Adam iyo Siciida C/raxmaan.
Buugan ayaa waxa uu ka hadlayay Saydaratul alxayaat, buugan ayaa waxa uu taabanayay Sida loo baahan yahay in qofku uu noloshiisa u maareeyo.
Qofka waxaa looga baahan yahay inuu ilaaliyo waqtiga iyo Dantiisa iyo arimihiisana sida uu ukala siin lahaa Muhiimada.
Buugan caawa lagu soo jeediyay madashan ayaa aad uxiisa badnaa . Da’ayartii halkaa iskugu timidna ay u wada bogeen sida quruxda iyo cilmiyaysan ee ay gabadhaa Da’ada yari ay buugaas uga soo jeedisay halkaas.
Buugan ayaa waxaa laga faa’iidaystay Sida loo maareeyn karo Nolosha.
Sidoo kale halkaa waxaa ugu danbayn ka hadashay Sagal Cali oo ka mid ah Kooxda Maskaxmaal oo sheegtay in sanadkii dhamaaday ay soo bandhigeen 12buug oo isugu jiray kuwo suugaaneed iyo ku cilmiya.
Waxa kale oo ay sheegtay inay qabteen bishii hore Tartan aqooneed kaas oo ahaa kii ugu horeeyay ee ay qabtaan kooxdan maskaxmaal.
Sagal ayaa waxa ay sheegtay in sanadkan Cusub ay kordhin doonaan Madashan akhriska ah kuna soo kordhin doonaan Buug aad uqiimo badan oo laga faa’iidaysan doono.
Kooxdan la baxday Maskax maal ayaa waxa ku bahoobay dhalin da’yara oo dhamaantood ubadan kuwa ka soo baxay jaamacadaha Dalka iyo kuwa dibada, waxa ayna Da’ayarta ufureen barnaamuj loo baahnaa oo ka maqnaa Magaalada Borama kaas oo ahaa madal buugta akhriska ah lagu soo bandhigo.
Taasna waxaaa la odhan karaa waa ay ku guulaysteen, waxa ayna mudan yihiin in lagu taageero dhalintaa dadaalka ay wadaan.
This entry was posted on January 2, 2010 at 1:55 pm	and is filed under News (Warka). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.